ဗစ်တိုရင်း Dartois သည်အသတ်ခံခဲ့ရသောလူငယ်ကျောင်းသားဖြစ်သည်။ အမှန်စင်စစ်သူကွယ်လွန်ပြီးနှစ်ရက်အကြာတွင်ဗစ်တိုရင်း၏သက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုစမ်းချောင်းအတွင်း၌တွေ့ရှိခဲ့သည်။ မကြာသေးမီကဒြပ်စင်အသစ်တစ်ခုသည်ဂျင်ဒါလူမျိုးများအားသံသယရှိသူကိုဖမ်းဆီးရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် Grenoble အစိုးရရှေ့နေသည်ဗစ်တိုရင်းဒရော့တူးအမှု၌သံသယရှိသူကိုဖမ်းဆီးခဲ့သည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်စွပ်စွဲခံရသူ၏အမည်ကိုပင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် - သေချာသည် Ludovic Bertin။ အမှန်စင်စစ်စစ်ကြောရေးကာလအတွင်းထိုလုလင်သည်ဗစ်တိုရင်းကိုသတ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။
ဤအချက်အလက်အသစ်နှင့်ရင်ဆိုင်ရစဉ် Dartois ၏ရှေ့နေဖြစ်သူ Me Kelly Monteiro ကသံသယရှိသူသည်မိသားစုနှင့်မနီးစပ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်ဗစ်တိုရင်းနှင့်သူမ၏လူသတ်သည်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး သိသည်ကိုသူမမသိပါ။ သူသည်ဗစ်တိုရင်းကိုသတ်သည့်အကြောင်းရင်းအတွက်ပင်လူသတ်သမားကရင်ဖွင့်ခဲ့သည်။ Ludovic ကသူ၏လုပ်ရပ်များသည်နှိပ်စက်ညှင်းပန်းခြင်း၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။ မကျင့်သောစကား ယုံကြည်တယ် မဟုတ် Dartois မိသားစု။ ထို့အပြင်မိသားစုရှေ့နေ၏အဆိုအရဗစ်တိုရင်းသည်ဖိနှိပ်ခံရပြီးနောက်သယ်ဆောင်ရမည့်အမျိုးအစားမဟုတ်ပါ။
Carmen Sama: "ငါဆက်ဆံရေးအသစ်အတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး"
Ludovic Bertin ကားအဘယ်သူနည်း
Ludovic Bertin သည်အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်ဖခင်ဖြစ်သည်။ ထိုလူငယ်ကို ၁၉၉၅ ခုနှစ်မေလ ၂၅ ရက်တွင်ဗင်နစ်စ်မြို့၌မွေးဖွားခဲ့သည်။ သူသည်မွေးချင်းတစ် ဦး ၏အမှားအယွင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသက် ၉ နှစ်သာရှိသေးပေမယ့်သူ့အဖေပျောက်ဆုံးမှုကိုသူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
ဖခင်ဖြစ်သူသည်ခိုးမှုကဲ့သို့သောရာဇ ၀ တ်မှုများစွာကြောင့်ရဲနှင့်တရားရေး ၀ န်ဆောင်မှုများကိုလူသိများသည်။ လက်နက်သယ်ဆောင်ခြင်းသို့မဟုတ်လူကုန်ကူးခြင်းများလည်းရှိသည် မူးယစ်ဆေးဝါးများ။ Ludovic သည်ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကြောင့်လနှင့်ချီ။ အီလက်ထရောနစ်လက်ကောက်သို့အတင်းအကျပ်ပို့ဆောင်ခံခဲ့ရသည်။ 2019 ခုနှစ်တွင်လိုင်ယွန်တရားရုံးကဖောက်ထွင်းမှုအတွက်သူ့ကိုစီရင်ခဲ့သည်။ သူသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ်တစ်ခု၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်လာသောအခါသူ၏အတိတ်ကိုစွန့်ခွာသွားပြီဟုလူတိုင်းကထင်ကြသည်။
“ သူ့မှာအောင်မြင်ဖို့အရာအားလုံးရှိခဲ့တယ်၊ ပြီးတော့သူ့အတိတ်ရဲ့စာမျက်နှာကိုပြောင်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်” လို့လူတစ်ယောက်ကဖတ်နိုင်ခဲ့သည်။
Ludovic Bertinဗစ်တိုရင်း Dartois
gendarmerie ၏အကြီးအကဲ Elisa Pilarski အမှုနှင့် ပတ်သက်၍ အံ့ new စရာကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်အသစ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်
စွပ်စွဲခံရသောဓားတစ်ချောင်းသည် Kumba တွင်မီးရှို့ခံရသည်!
ဇွန်လတွင်ပျောက်ကွယ်သွားသောဆေးကျောင်းသား Pierre Boyette ၏သက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနန်စီအနီးတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည် လွန်ခဲ့သော2ပတ်က
[…] les bois de Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle). Selon la parution du journal Lorraine Actu, sa dépouilleaété retrouvée […]
Jean-Pierre Pernaut သည် Emmanuel Macron အပေါ်အကြီးအကျယ်ဒေါသထွက်နေသည် လွန်ခဲ့သော2ပတ်က
[…] le chef d’État avait décrété un couvre-feu au grand malheur des jeunes. Une décision prise pour diminuer la progression imminente de la […]
သူတော်စင်အားလုံး၏အားလပ်ရက်များပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းများကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည် လွန်ခဲ့သော2ပတ်က
Aditya dit လွန်ခဲ့သော ၁ ပတ်က